सरिता गिरीलाई केही प्रश्न - सरिता गिरीलाई केही प्रश्न -
सरिता गिरीलाई केही प्रश्न
मिन बहादुर सुनुवार ‘सुमन’ ३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार
३१ जेठ २०७७ । यो दिन आम नेपालीको लागि खुसी र हर्षको ऐतिहासिक दिन हो । संसदमा भएका सबै दल एक भएको दिन । अनि अभूतपुर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको दिन । त्यति मात्रै होइन, ५८ वर्ष पहिले भारतले कब्जा गरेको नेपालको भूमी लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो र त्यसलाई फर्काउने विषयमा संघीय संसद एकजुट भई संविधान संशोधन भएको दिन हो । यो दिनको महत्वपूर्ण निर्याय इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिनेछ ।
नेपाल राष्ट्रको एकता, अखण्डता, स्वाधिन्ता र सार्वभौमिकताको पक्षमा सम्पूर्ण नेपाली जनता, संघीय संसद र नेपाल सरकार एकजुट भएको छ । सरकार पक्ष, प्रतिपक्ष, मधेशी सांसद सबै एकढिक्का भएर नेपालको निशान छाप परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गरेका छन् । राष्ट्रिताको सवालमा सबै एक ठाँउमा उभिएका छन् । यस अर्थमा नेपाली जनता हर्षित् छन् । तर यो खुशीको किनारमा सरिता गिरी, नेपालकी बुहारी रुदै संसददेखि बाहिरिएकी दृश्य हामीले देख्यौँ । मधेशमा भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रुपमा भएका अथवा गरिएका विभेद र थिचोमिचोका बिरुद्धमा आवाज उठाउने नेतृको रुपमा चिनिने सरिता गिरीले राष्ट्रियताको पक्षमा एउटै स्वरमा लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने बेलामा उनीले आफ्नो छदमभेदी स्वरुप देखाइन् । जुन निकै दुःखद र खेदजन्य छ ।
आज सरिताले आफुले नै खाएको त्यो शपथलाई बिर्सिनन् मात्र आलाङकारीक रुपमा अर्को देशको महान्ताको पक्षमा उभिन् । छिमेकी देश जसले नेपालको भूमी बलपूर्वक मिचेको छ, उसको पक्षमा नै बोलिन् । सीमाना र राष्ट्रियताको पक्षमा पूरा संसद एकजुट हुँदा उनी भारतको पक्षमा खुले लागिन् । लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमी नै हैन भन्ने कुतर्क गरेर आज तीन करोड नेपाली जनताको मनमा चोट पुर्याइन । त्यसकारण, उनी नेपाली जनताको नेतृ हो वा भारतीय एजेन्ट । सरिता गिरीलाई खुल्ला रुपमा केही प्रश्न सोध्न चाहान्छु ।
पहिलो प्रश्न, संघीय संसदबाट ५८ वर्ष पहिले गुमेको भूमी फिर्ता ल्याउन संसद एकजुट भएको बेलामा सरिता गिरी, तपाइँले संविधान संशोधनलाई किन अस्वीकार गर्नु भयो ? आज संसद नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको सवालमा एकजुट हुदै गर्दा सरिता गिरीले त्यसमा साथ दिइनन् । उनी राष्ट्रियता र अखण्डताको विरुद्धमा उभिन् । आफुलाई नेपालको बुहारी मात्र होइन नागरिक हुँ भन्नेले जमिन मिच्ने लुटेरालाई खुल्लमखुल्ला रुपमा साथ दिइन् । भारतीय हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा आवाज वुलुन्द गर्नु पर्ने बेलामा उल्टै भारतको पक्षमा बोल्न मिल्छ ? तिमीले गरेको राजनीति आज छर्लङग भयो । राष्ट्र र जनताको नाममा खाएको शपथ धोका भयो । ती सब आडम्बरी रछन् । जनताले तिम्रा भडकिएको आत्मालाई बुझेका छन् ।
दोस्रो प्रश्न, के १८१६ को सुगौली सन्धि नेपालले भारतसँग गरेको थियो? के त्यो सन्धिपत्र अनुसार काली नदीको मुहान दुई देशको सीमाना थिएन? सरिता म्याडमले जान्नु पर्छ की सुगौली सन्धि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कमपनीसँग भएको थियो । जुन बेला भारत भन्ने देश जन्मिएको नै थिएन । र, त्यो सन्धि अनुसार काली नदी वारी नेपाल र पारीको जमिन उक्त कम्पनीको नियन्त्रणमा रहने सम्झौता भयो । काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । तसर्थ लिम्पियाधुरा नै दुई देशको सीमाना हो । तर, आज भारतले काली नदी भनेर लिपुलेकबाट बग्ने सानो खोलालाई भन्दैछ । जुन नक्कली नाम हो । यहाँनिर, भारतले षडयन्त्र रचेको छ । सक्कली काली नदीलाई होइन नक्कली काली नदीलाई दुई देशको सीमाना ठानेको छ । सरिता गिरी जस्ता नेतृले आफ्नो देशको सीमाना अथवा भूगोललाई चिन्नु पर्छ । जान्नु पर्छ । तर, अफसोच उनी पनि नक्कली सरतिा नै हुन की?
तेस्रो प्रश्न, के भारतले नक्सा नेपाल देशलाई सोधेर छापेको हो ? भारतले विवादित ठाँउबाट मनसरोवरसम्म पुग्ने बाटोको उद्घाटन गर्दा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएन । भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो । जुन नक्सामा नेपाल र भारतबीचमा सहमती हुन बाँकी भूगोल पनि समेट्यो । तर त्यो जमिन विवादित होइन, नेपालको जमिन हो । भारतले त्यो जमिनमा विवाद गर्न चाहान्छ । सरतिा गिरीले भने झै विवादित भूमी बनाएको भारतले हो । त्यो भूमी विवाद नगरौं । किनकी लिम्पियाधुराा नेपालको हो । सरतिा गिरी, इतिहासलाई पल्टाएर पढ्नु होस् । सन्धिको प्रत्येक धारामा आँखा गाडेर पढ्नुहोस् ।
चौंथो प्रश्न, के नेपालले भारतलाई नसोधी नयाँ नक्सा जारी गर्नु बल्नडर गल्ति भयो? नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्यो । तर, गिरी म्याडम जुरुक्क र बुरुक्क गर्दै भारतलाई नसोधी नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्नु हुन्न भन्ने तर्क गरिन् । त्यसो गर्दा भारत रिसाउने । उसलाई ठूलो चोट पर्ने । छिमेकी देशलाई रिझाउनु पर्ने जस्ता तर्क गर्दै सामाजिक संजालमा छाएकी छिन् । के नेपालको नक्सा जारी गर्न अरु देशलाई सोध्नु पर्छ ? नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रले आफ्नो भूगोलको नक्सा छाप्न र प्रकासित गर्न पाउछ । कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन भन्ने कुरा गिरी जस्ता महान नेतालाई तेति पनि थाहा नहुँनु भनेको बौदिक अनपढ हुनु हो । के भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपाल सरकारलाई सोधेको थियो ? उसको हेपाह व्यवहारले नेपाल र नेपाली जनताको मन दुःखेको छ । के सरिताले यो कुरालाई गम्भिर रुपमा बुझेको छ ? मुखमा जेजे आयो बोल्दै हिडने ।
पाँचौं प्रश्न, के लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने प्रमाण नेपालसँग छैन त ? अवश्य पनि छ । गिरीले सार्वजानिक रुपमा भनेका छन् , के नेपालसँग प्रमाण छ ? लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने आधार के ? गिरीलाई स्पस्ट रुपमा भन्न जरुरी छ की त्यो हाम्रो भूमी हो । नेपालको जमिन हो । यसको यथेष्ट प्रमाण भनेको सुगौली सन्धि हो । यदी सुगौली सन्धिलाई भारत सरकारले स्वीकार्दैन भने नेपाल १८१६ भन्दा अगाडीको युगमा प्रवेश गर्ने छ । जुनबेला नेपालको भूगोल पुर्पमा टिष्टा र पश्चिममा किल्ला काङगडा नदीसम्म थियो । दक्षिणमा देहरादुनसम्म थियो । जुन जमिन अहिले विहारमा पर्छ । के ती भूमी नेपाल सरकारलाई फर्काउन भारत तयार छ ? अर्को प्रमाण भनेको २०१८ सालमा कालापानी र लिम्पियाधुरामा बसोबास गरेको जनगणनाको तथ्याङक छ । नेपाल सरकारसँग त्यो सुरक्षित छ । आवश्यक परेको बेलामा उक्त प्रमाणलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । विभिन्न सालमा भारतले नै बनाएको नेपालको नक्सा छ । जुनमा लिम्पियाधुरा नेपालको भूमीका रुपमा समावेस गरिएको छ । हिजो अङग्रेजले बनाएको देशलाई ‘हमरा महान भारत’ भन्ने अनि उसले हस्ताक्षर गरेको सन्धि संझौता चाहीँ मान्दिन भन्न मिल्छ ? गिरी जस्ता पतुर नेतृले बुझे हुन्छ , नेपाल देश तिम्रा माइती भन्दा अटल र प्राचीन देश हो । जुन इतिहासमा कसैको गुलामी थिएन । वैरीको साशन र उपनिवेशलाई मानेन । ‘इण्डियन आर डगस’ भन्दै बुटले इण्डियनको शिर र छातीमा कुचल्नेहरुसँग बहादुरपूर्वक लडेको देश हो नेपाल । सरिता जस्ति एउटा सामन्य नेतृलाई नेपालको त्यो विरासत र गाँथाको इतिहास थाहा छ ? थाहा नभए इतिहास पढ् , नत्र देशको जमिनको बारेमा नेपालसँग प्रमाण माग्ने तिमी को हौं ?
छैटौं प्रश्न, के नेपालले सँधै भारतको ठूल्दाई प्रबृतिलाई मान्नु पर्ने ? भारत सँधै आफुलाई हाती र अरुलाई बोका जस्तै ठान्दछ । उसका ठूलापन र अहमतालाई मान्दिनु पर्ने । स्वीकार गर्नु पर्ने । उसले जेजे भन्छ, सबै कुरा मान्नु पर्ने । उसको भक्ति गर्दा बाचिन्छ नगरे मरिन्छ । के यी कुरा जायज छन् ? हामी नेपाली भएर बाँचनु पर्दा उसलाई किन चाकरी गर्नु पर्ने ? तसर्थ, भारतीय साशकको हेपाह र निर्देशित कुरालाई मानिन्दैन । राज्य भूगोलले ठूलो होस वा सानो तर राज्यको अस्तित्व समान हुन्छ । ठुला देश भन्दैमा साना देशलाई हेप्न र पेल्न मिल्दैन । तसर्थ, भारतको ठूल्दाई प्रबृत्तिलाई अस्वीकार गरिन्छ । खारेज गरिन्छ । हामीसँग एउटा पौराणीक कथा छ । जुन कथामा भारत हाम्रा ठूल्दाई होइनन् , ज्वाइ खालक हुन् । त्रेता युगमा सिता, नेपालकी छोरी , बुहारी बनेर अयोध्या गइन् । उनीले आफ्नो श्रीमानको मात्र नाम राखिनन् , त्यसबेला अयोध्या राज्यको नाम र शान राख्न सफल भइन । कलियुगका बुहारीको हालत हेरौं । ठिक उल्टो परिणाम पाउछौं । आज सरिता राज्यको जमिनको बारेमा गलत तर्क गर्दै छिन् । नेपालकै गल्ति हो भन्दै बोल्दैछिन् । हिजो गल्ति भए होलान् । तर, आज गल्ति सच्याउने ठाँउमा जनताले कसलाई चुनेर पठाएको छ ? जवाफ चाहियो सरिता म्याडम ।
सातौं प्रश्न, के नेपाल सरकार र नेपाली जनता तपाइँले भने झैं चीनको लहैलहैमा लागेर भारतको बिरोध गरेको हो ? यो निरधार छ । नेपाल कसैको पक्ष र विपक्षमा छैन । नेपाल भारतको विपक्षमा छैन तर, नेपाल भारतीयक हेपाह प्रबृतिको विपक्षमा छ । नेपाल सँधै सीमाना अतिक्रमण र वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा छ । भारतसँग हाम्रो निकै नजिकको सम्बन्ध छ । तर, के नेपालले भारतलाई नाकाबन्दी गरेको छ ? के चीनले नेपाललाई तीनतीन पटकसम्म नाकाबन्दी गरेको छ ? नेपाललाई कसले नाकाबन्दी गरेर हैरान पार्यो ? के तपाइँलाई यो कुरा थाहा छैन ? देशमा नाकाबन्दी लगाएर सम्पूर्ण जनता हैरान भएको बेलामा सरिता गिरी कुन दुलोमा लुकेर बसेको थिइन ? जसले बढी दुःख दिन्छ उसैको विपक्षमा जनता खनिनु स्वभाविक हो । नेपाललाई कतैपनि ढल्कन नदिन र उस्का विरुद्धमा नलाग्ने वातावरण बनाउन भारतले नेपालसँग मित्रता दरिलो बनाउनु पर्छ । अहंता र घमंड त्याग्नु पर्छ । ठूलो छाती बनाएर नेपालको जमिन फिर्ता गर्नुपर्छ । सरिता गिरीज्यू, के भारतले यी व्यवहार हामीसँग गर्लान त ?
अन्तमा, जनता समाजवादी दलका नेतृ सरिता गिरीले जिवन कै गम्भिर भूल गरिन । नेपाल आमा र नेपाली जनताप्रति गद्दारी गरिन् । नेपाल आमाको कोखमा छुरा चलाइन् । भोली उनलाई पाप लाग्ने छ । नेपाल आमाको ५८ वर्ष पहिले भारतले हडपेको जमिन फिर्ता गर्ने यो ऐतिहासिक निर्णयमा उनी नमज्जाले चुकिन । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको गुन तिर्ने समयमा धोका दिइन् । उहाँ जन्मिएको र हुर्किएको देश जहाँ भए पनि आज नेपालको छोरी हुन । बुहारी हुन् । नेपालको राजनीतिमा उहाँको अपार योगदान छ । मुख्यतह मधेशमा भएका अथवा गरिएका तमाम थिचोमिचोका विरुद्धमा आवज उठाउने महिला तथा मधेशी नेतृ हुन् । तर, आज उनले आफ्नो हैसियत देखाइन । जुन नेपाल र नेपाली जनतालाई अस्वीकार्य छ । यी कुकर्मको हिसाबकिताब भोली जनताले फैसला गर्ने छन् । र, जनताको अदालतमा सरिता गिरी जस्ता राष्ट्रघातीहरुको एकएक हिसाब हुनेछ । तसर्थ, भारतले लुटेको अथवा बलपूर्वक मिचेको जमिन फर्काउन आज जजस्ले संसदमा भुमिका खेल्न आँट गरे, जनताले उनीहरुलाई सम्मान गर्ने छन् । जनताले पक्कै साथ दिनेछन् ।